थप गरिएका स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन होलाकि नहोला ? निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय | suryakhabar.com
Home राजनीति थप गरिएका स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन होलाकि नहोला ? निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय
थप गरिएका स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन होलाकि नहोला ? निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय
on: १२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०६:४७ In: राजनीतिTags: थप गरिएका स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन होलाकि नहोला ? निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णयNo Comments
काठमाडौं । सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र तय गर्न समस्या हुने बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १५ र १६ जेठमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिसक्ने कार्यसूची छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्नुअघिसम्म सबै मतदाताको नामावली आवश्यक पर्ने शर्माको भनाइ छ । शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, अहिले थपिएका २२ स्थानीय तहको वडाको सिमानाबारे नै प्रस्ट नभएकाले झनै समस्या भएको छ ।
‘मतदाता परिचयपत्रमा ठेगाना परिवर्तन गरी पुनः छाप्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने १५ र १६ जेठसम्म सम्भव नै छैन,’ शर्माले भने । मतदाता नामावली मिलाउनै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले थपिएका स्थानीय तहमा १५ र १६ जेठभित्र निर्वाचन अधिकृत पठाउन सम्भव नभएको दाबी गरेको छ ।
Tags: थप गरिएका स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन होलाकि नहोला ? निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय
यसकारण ह्वात्तै बढेको रहेछ गर्मी, मौसमविदहरुले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
राष्ट्रपतिद्वारा दलहरुलाई सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान
१२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०६:४७